Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseBulgaria zokuPhula » Abantu abangama-45 basweleke kwingozi yebhasi yaseBulgaria
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseBulgaria zokuPhula • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngokwamajelo eendaba aseBulgaria, bonke abakhweli abangama-50 babe ngabemi baseAlbania, ngelixa bobabini abaqhubi babeneepaspoti zaseMntla eMacedonia.
Ibhasi yabakhenkethi eneepleyiti zelayisensi yaseMacedonian yaseMntla yantlitheka yaza yagqabhuka ngasentshona Bhulgariya uhola wendlela.
Ibhasi, eyayibhaliswe eMntla Macedonia, yayisuka e-Istanbul isiya eSkopje.
Ngokutsho kwegosa loMphathiswa Wezangaphakathi eBulgaria, uNikolai Nikolov, ubuncinci abantu abangama-45, kuquka nabantwana abaliqela, basweleke kwingozi emanyumnyezi eyenzeke ngentseni yangoLwesibini, malunga nentsimbi yesibini ngexesha lasekuhlaleni.
Abantwana abalishumi elinesibini basweleke kule ngozi, amajelo eendaba aseBulgaria axela. Ezinye iingxelo zithi kwabulawa abantu abangama-46.
Iqaqobana labantu abasindileyo, abanye betsha ngokuqatha, basiwa kwisibhedlele esikwikomkhulu laseBulgaria, iSofia.
Intloko yecandelo labatshileyo kwesi sibhedlele uMaya Argirova uthi amanye amaxhoba onzakele etsiba iifestile ngethuba ezama ukubaleka ebhasini.
Unobangela wale ngozi awukaziwa.
Kwakukho abantu abangama-52 ebhasini. Ngokwamajelo eendaba aseBulgaria, bonke abakhweli abangama-50 babengabemi base-Albania, ngelixa bobabini abaqhubi babeneepasipoti zaseMakedoniya zaseMantla.
BhulgariyaUmphathiswa wezangaphakathi uBoyko Rashkov uthe le ntlekele “eyoyikekayo” iza kuphandwa.